Dhaxalka Buugga Haaneed - Qaybta 3aad - Somaliland Post
Home Maqaallo Dhaxalka Buugga Haaneed – Qaybta 3aad
Ma dhammaystiri karo maansooyinka i soo jiitay ee dhiganahan ku jiro sidoo kale waxaa ka mid ah; Maansada “Guur”. Maansadani waxay ka mid tahay maansooyinka ku jira filimka “Abaydin abaydin dhalay” waxana ay ka hadlaysaa wanaagii uu lahaa guurkii hore, cid kale lama hadlaysee dhallinyarada ayey si gaara ula hadlaysaa. Waxay u sheegaysaa in guurku lahaan jiray, milge, maamuus, masruuf, mariin iyo martabad sare. Waxa kale oo ay intaas u raacinaysaa haddiiba aan la soo celin milgihuu lahaan jiray guurku in la dhaxli doonno hoog iyo halis. Waxay tidhi sidan:
Guurkeennu milguu lahaa
Macniyo qiimuu lahaa
Miisaan weyn buu lahaa
Xaq-dhawr iyo marin gobeed
Maamuus culus buu lahaa
Guurkeennu maqaam sariyo
Martabad dheer buu sudhnaa
Marriin238 bay inantu leyd
Mas’uul bixiyey lahayd
Masruuf baa loo qarridhey
Meexaamii239 Gacalka iyo
Tol aan kala maarmi karin
Ayaa meehaahi240 jiray
Macooyiyo hooyo wacan
Marwaa loo xeeban jiray
Markay xaleeleen carruuri
Hadduun buu muuno jabay
Mudnaantii la diley
Macaan laga dhigey qadhaadh
Sharciga meel kagama yaal
Dhallinyaroow magan Allee
Haddaan talo loo miyirin
Shareecada lagu mitidin
Sooyaalkeenii la marin
Marwaadkuu dhaqan lahaa
Haddaad mijo xaabisaan
Waxyaabaha muxarrimka ah
Haddaad u miliilicdaan
Hadhow midhahay dhashiyo
Waxaad ka magaabataan
Markhaataa laga ahaan.
Maansooyinkii ugu horreeyey ee abwaanku tiriyey waxaa ka mid ahayd maanso waxbarasha ka hadlaysa maansadan waxa uu u tiriyey arday xilligaas uu tiriyey dhammaystay waxbarashoodii sannadkii 1985-kii. Qoddobada uu kaga hadlay maansada waxaa mid ahaa waajibaadka laga rabo ardayga, sida habdhaqan wanaagsan, dulqaad iyo darreen samo fal ku dhisan waxa uu yidhi;
Arday waxaannu nahay
Asluub iyo dul-qaad
U asxaan faloo
Lagu wada ogyee
Awrba awrka hore
Inta uu socduu
Kan danbana ogyoo
Ma tusnaa awoo?
Dhabbo aayo wacan
Ee adduunka dhibay
Eel baa ka daran
Ma ka aarsanaa?!
Kama helinoo kaliya suugaan cusub iyo erayo cusub ee waxaan ka ogaaday, baadisoocda aynu lahayn, dhaqankeennuu siduu hodanka u ahaa iyo sida maanta loo cidleeyey , iyo siday dhalin badani uga dhooftay dhaqankoodii wacnaa!
Ugu danbayn Suugaanta halkan u dhigani waa suugaan wax ku baraysa. Waxay noloshaada ka dhigayaan mid mid taaganta iyo tagtadaba wax ka garanaya, mid sita toosh uu wax badan oo ka qarsoonaa ku ogaanayo. Waa Suugaan muuqaalka aad ka arkayso maahee kuwo kale ku qarsoonyahay oo loo baahanyahay inaad adigu lafo gurto.